Iindaba-kwiShishini leFiberglass yeHlabathi
Imakethi ye-fiberglass kwihlabathi liphela kulindeleke ukuba ikhule nge-US $ 7 Billion, eqhutywa kukukhula okuhlanganisiweyo kwe-5. 9%. Uboya beglasi, elinye lamacandelo ahlalutyiweyo kunye nobungakanani kolu phononongo, libonisa amandla okukhula ngaphezulu kwe-6.
NgoFebruwari 04, 2020 13: 58 ET | Umthombo: ReportLinker
ENew York, ngoFebruwari 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Reportlinker.com ibhengeza ukukhutshwa kwengxelo "Ishishini leGlobal fiberglass" - https://www.reportlinker.com/p05798567/?utm_source=GNW
8%. Izinto eziguqukayo eziguqukayo ezixhasa oku kukhula kwenza ukuba kubaluleke kakhulu kumashishini akule ndawo ukugcina ulwazi ngokutshintsha kwemarike. Kukulungele ukufikelela ngaphezulu kwe-US $ 6.2 yezigidigidi ngonyaka ka-2025, uboya beglasi buya kuzisa ukuzuza okunempilo ukongeza
Umtsalane obalulekileyo kuhlumo lwehlabathi.
-Ukumela ilizwe eliphuhlileyo, i-United States iyakugcina ukukhula nge-5%. Ngaphakathi eYurophu, eqhubeka nokuhlala iyinto ebalulekileyo kuqoqosho lwehlabathi, iJamani iya kongeza ngaphezulu kwe-US $ 250 yezigidi kubungakanani bommandla kwaye
clout kwiminyaka emi-5 ukuya kwezi-6 elandelayo. Ngaphezulu kwe-US $ 210.9 yezigidi zexabiso lemfuno eqikelelweyo kwingingqi ziya kuvela kwiimarike zaseYurophu. EJapan, uboya beglasi buzakufikelela kubungakanani bemakethi ye-US $ 241.3 yezigidi xa kuvalwa ixesha lohlalutyo. Njengoqoqosho lwesibini ngobukhulu emhlabeni kunye notshintsho lomdlalo omtsha kwiimarike zehlabathi, i-China ibonakalisa amandla okukhula nge-8.8% kule minyaka imbalwa izayo kwaye yongeze malunga ne-US $ 1.9 yezigidigidi ngokubhekisele kumathuba anokulungiswa.
abanqwenela amashishini kunye neenkokheli zabo ezikrelekrele. Ukuboniswa kwimizobo etyebileyo ebonakalayo zezi kwaye uninzi lwazi-oluninzi lwedatha ebalulekileyo ekuqinisekiseni umgangatho wezigqibo zesicwangciso, nokuba kukungena kwiimarike ezintsha okanye kulwabiwo lwezixhobo.
ngaphakathi kwipotifoliyo. Izinto ezininzi zoqoqosho olukhulu kunye namandla emarike yangaphakathi aya kubumba ukukhula kunye nophuhliso lweepateni zebango kumazwe asakhasayo eAsia-Pacific, Latin America nakuMbindi Mpuma. Zonke iimbono zophando ezichaziweyo zezi
ngokusekwe kuthethathethwano oluqinisekisiweyo lwabaphembeleli kwintengiso, izimvo zabo zithatha indawo yazo zonke ezinye iindlela zophando.